မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: မွတ်စလင်မ်အမျိုးသ္မီးများ၏ ဗလီတွင်စွလာသ်ဝတ်ပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးချက်များ
မွတ်စလင်မ်အမျိုးသ္မီးများ၏ ဗလီတွင်စွလာသ်ဝတ်ပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးချက်များ
မာစ့်ဂျစ်ဒ်ခေါ်ပလီသည် အမျိုးသား အမျိုးသ္မီးများအတွက်ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်၏သဘောတရားမှာအကယ်၍ ဗလီသည် မွတ်စလင်မ်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်လျှင် အမျိုးသား အမျိုးသ္မီး နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိုအပ်သောနေရာဖြစ်နေပါသည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) လက်ထက်မှာလည်း မွတ်စလင်မ်အသိုင်းအဝိုင်းမှ အမျိုးသား အမျိုးသ္မီး များပလီတွင်စွလာတ်ဝတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ခိုင်လုံသောသက်သေအရ တမန်တော်မြတ်မှ မိန့်ဆိုခဲ့သည်မှာ စွလာတ် ဝတ်ပြုတဲ့အချိန်မှာ မိခင်များနှင့်လိုက်လာသော ခလေးငယ်များ၏ငိုသံကိုမကြာခဏကြားခဲ့ရသည်။ ဗလီများတွင်ဝင်ပေါက်တံခါး ခပ်များများ ရှိကြသည်။ တစ်နေ့၌တမန်တော်မြတ်က ဤတံခါးပေါက်ကို အမျိုးသမီးများအတွက်ထားလိုက်ပါဟုမိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ အဓိပ္ပယ်မှာအမျိုးသမီးများထိုတံခါးမှဝင်ရန် ဖွင့်ထားပေးရန်ဖြစ်သည်။
အကျယ်တဝင့်ဖတ်ရန် : http://www.tamilislam.com/ENGLISH/human_rights/Islamdiscouragewomen...
ရန်ကုန်မြို့တွင် ၅၉ လမ်းဗလီ၊ တစ်ခြမ်းပဲ့ဗလီ (အောင်ဆန်းကွင်းအနီး) နှင့် ဆဗာရှားဒါရ်ဂါဗလီတို့တွင် အမျိုးသ္မီးများစွလာတ်ဝတ်ပြုကြသည်။ ထိုဗလီများတွင်အမျိုးသ္မီးများ စွလာတ်ဝတ်ပြုရန်သီးသန့်အခန်းလည်းရှိပါသည်။ ထို့ပြင် တစ်ခြားနိုင်ငံ များဖြစ်ကြသော ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗရူနိုင်း၊ တရုတ် Saudi Arabia, Jorden, Iran, Sweden, England, America, Sumalia နိုင်ငံ များမှဗလီများတွင်အမျိုးသ္မီးများ စွလာတ်ဝတ်ပြုလေ့ရှိကြပါသည်။
ကြောင်းအရာများနားလည်လာခြင်း၊ ဗလီတွင်မွတ်စလင်မ် ညီအစ်မများနှင့် အတူစွလာတ်ဝတ်ပြုရခြင်း၊ ခင်မင်မှုရခြင်း၊ ရမ်မဒန် လမြတ်တွင်မွတ်စလင်မ်များအတူ ဝါဖြေကြခြင်း၊ သာရာဝီအတူဖတ်ကြခြင်း၊ အီးဒ်စွလာတ်အတူဖတ်ကြခြင်း၊ သာသနာရေး လုပ်ငန်းဆောင်များ အကြောင်း (activities) သိရှိနားလည် ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြခြင်း၊ ခလေးများ (ကိုယ့်မျိုးဆက်သစ်များ) ကို အစ္စလာမ်သာသနာသင်ခန်းစာများသင်ယူစေခြင်း၊ သာရေး၊ နာရေး ဝိုင်းဝန်းကူညီကြခြင်း၊ မွတ်စလင်မ်မောင်နှမများပိုမို
Some Comments from IYS members
by maylaynyo on May 25, 2009
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ရလို့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်..။ ဒီမှာတော့ shopping mall ကစလို့ နေရာတိုင်းမှာ အမျိုးသားဝတ်ပြုခန်းနဲ့ အမျိုးသမီးဝတ်ပြုခန်းဆိုပြီး ခွဲခြားထားပါတယ်။ ဗလီမဟုတ်တဲ့ ၀တ်ပြုခန်းမှာတောင် အစ္စလာမ်အချင်းချင်း တွေ့ဆုံခင်မင်ရတာ အရမ်းကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေသွားလို့ရတဲ့ဗလီကိုတော့ မရောက်ဖြစ်သေးပါဘူး။ မမီးရဲ့ ပို့စ်ထဲက ဗလီသွားရင် ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖတ်ပြီး တစ်နေ့တော့ ရောက်အောင်သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတယ်.. :) ကျေးဇူးပါရှင်။
by Ashabil Salam on May 27, 2009
အမျိုးသမီးဗလီသွားလို့ရပါတယ်၊အကောင်းဆုံးအိမ်မှာပါ မလေးမှာတော့အိမ်နဲ့ဝေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေ ဗလီ၊နမာဇ်ဖတ်တဲ့အခန်းတွေမှာဝတ်ပြုပါတယ်၊ ရပ်ကွက်ဗလီကိုတော့ညပိုင်း ယျောက်ျားနဲ့ ၊သားနဲ့အတူလာလေ့ရှိပါတယ်၊ဗလီလာတာမတားပါဘူး လာရမယ်လို့လဲမခိုင်းပါဘူး၊ လူမျိုးတမျိုးနိုင်ငံတခုရဲ့ လုပ်ရပ်ကသာသနာရဲ့အထောက်အထားမဖြစ်ပါဘူး၊ ကာလဒေသနဲ့အဆင်ပြေရင်ကောင်းပါတယ်၊
by dreamtrader786 on June 8, 2009
yes,,Let's me tell the Masjid in which women can pray Jumuah Salatt.
It is Dargha Jarmay Mosque in Thanlyin.If anyone want to come to there,you would take about 45 minutes from Yangon to there.
by Min Than Win on June 20, 2009
အမျိုးသမီးများ ဗလီသို့ သွားခြင်းသည် တမန်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင် တားဆီးခဲ့သော ပညတ်မဟုတ်ပါ ....အီးဒ်နေ့များတွင် အီးဒ်ဂါသို့ အမျိုးသမီးများ ထွက်လာ၍ ၀တ်ပြုကြရန် ၀တ်ပြုမှုတွင် မပါဝင်နိုင်ပါကလည်း ခွတ်သ်ဘာမိန့်ခွန်းကိုနားထောင်၍ ဒုအာတွင်ပါဝင်ကြရန်မိန့်ကြားချက်များရှိခဲ့သလို အီးဒ်နမာဇ်အပြီး အလှုဒါနများတွင် အမျိုးသမီးများ ကမိမိတို့၏လက်ဝတ်ရတနာများ ကိုပါ အလ္လာဟ်လမ်းတွင် ချွတ်၍လှုဒါန်းခဲ့ကြကြောင်း အစ္စလာမ်သမိုင်းဆီရတ် များတွင်ပါရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ယနေခေတ်ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် တောင်အာရှနိုင်ငံများ မှာမှု အချို့သော ပညာရှင်များ ၏ ဖွင့်ဆိုချက် အချို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ နမာဇ်ဖတ်ခြင်းကို ယူဆချက်ကွဲလွဲမှုများတွေရပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ယင်းသည် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် တမန်တော်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်ခွင့်ပြုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ အချိန်ကာလ ကယင်းသော ကွဲလွဲမှုများကို ကုစားသွားနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါကြောင်း ....
by Wai Yan Tun on April 3, 2010
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ရတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ယနေ့အချိန်အခါမှာ အများစုက အမျိုးသမီးများ ဗလီမှာ ဆွလာသ်ဝတ်ပြုမှုနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဘာကြောင့်ပိတ်ပင်ချင်ကြလဲဆိုတာမသိပါဘူး။ ကျွန်တော် နေရာတော်တော်များများမှာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်လို့ ပြဿနာကြုံ့တွေ့နေရတာကို ကြားသိဘူးပါတယ်။ တစ်ချို့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် တစ်ချို့မှာ အမျိုးသမီးများ ဆွလာသ်ဝတ်ပြုမှုကို ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ သာသနာ့ပညာရှင်အချို့က ဒီကိစ္စအတွက် ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်လာ အာယသ်များ တမာန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ သြ၀ါဒတော်များနဲ့ ရှင်းလင်းတင်ပြကြသော်လည်း တချို့က မည်သိအကြောင်းကြောင့်မသိပါ ယနေ့တိုင် ငြင်းဆန် နေဆဲရှိတာကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လူငယ်အများစု (ကျွန်တော်အပါအ၀င်) သည် အထက်ပါကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကျယ်တ၀င့် မသိရှိကြပါ ထိုအတွက် ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဗဟုသုတအများကြီးရရှိပါတယ်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ကျေးဇူးအများကြီးတင်မိပါသည်။ နောက်တွင်လည်း အာလားတူ ဗဟုသုတရရှိစေမယ့် ပို့စ်များကို အလ္လာဟ်အရှင် အကူအညီနဲ့ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ........... အားမီန်း။
ဟဇရသ်အွန်မရ် သခင် လက်ထက်တွင် . . . အမျိုးသမီးများ ပလီတက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်လိုက်သဖြင့် . . . အမျိုးသမီးများက . . . အာအိရှာသခင်မထံသို့ တိုင်ကြားကြ လေသည် . . . ထိုအခါ အာအိရှာသခင်မက . . . ထိုအမျိုးသမီးတို့အား . . . ပြန်လည်ပြောပြသည်မှာ . . . ယခုကဲ့သို့ အခြေအနေများကို . . . တမန်တော်မြတ် (swllh) သိလျှင် . . . အိစ်ရာအိလ်မျိုးနွယ်မှ အမျိုးသမီးတို့ကို . . . တားမြစ်ပိတ်ပင်သကဲ့သို့ . . . အသင်မတို့ကိုလဲ ပိတ်ပင်လိမ့်မည် ဟု ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ (ဗို့ခါရီကျမ်း)
ဟဖရသ်အိုမရ်သခင်ဟာ . . . တမန်တော်မြတ် (swllh) နဲ့ အတူတူ . . . သာသနာရေးလုပ်ငန်းတွေကို . . . သက်စွန့်စံဖြား လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ . . . ဒုတိယ ခလီဖွာ တစ်ပါးပါ . . . ခေလာဖသ် အတွက် ကိုလဲ တမန်တော်မြတ် ကိုယ်တော်တိုင် အမိန့်ပေးခဲ့တာပါ . . . အဲဒီလို တမန်တော်ကိုယ်တော်တိုင် ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့ . . . ဆွဟာဗာတစ်ပါးဟာ . . . မွစ်လင်မ်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ . . . အခွင့်အရေးကို ဆုံးရှုံးနစ်နာစေလိုတဲ့ သဘောမျိုး ရှိမယ့် သူမျိုး လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး . . . တမန်တော်မြတ်ရဲ့ ဟဒီးစ်တော်တစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် . . . အမျိုးသမီးများ . . . မိမိနေအိမ်ရဲ့ ဒေါင့်တစ်နေရာမှာ . . . ဖတ်သောနမာဇ်ဟာ . . . အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဟဒီးစ် ပါ . . .
နောက်ပြီး အမျိုးသမီးများ ပလီ တက်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာကြီး ဦးနု ရေးသားခဲ့သော . . . 35ခန်းကျမ်းမှ ကောက်နှုတ်ချက် အချို့ကို . . . တင်ပြပေးခဲ့ပါ့မယ် . . .
အမျိုးသမီးများ ဂျမာအသ်သို့ မသွားရ . . . မက္ကရူဟ် ဖြစ်တယ် . . .
အမျိုးသမီးများအတွက် . . . အိဒ်နမာဇ် နဲ့ ဂျို့မို့အာ နမာဇ် အတွက် တာဝန်မရှိချေ . . . (35 ခန်းကျမ်း)
by Htay Lwin Oo on September
ကျမ်းတော်ရဲ့ ၆၅း၉ မှာ အို- အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့- သင်တို့သည် စုဝေးရာသောကြာနေ့၏ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကို ခံရသော် အလ္လာဟ်မြတ်အား သတိရရာဆီသို့ အလျှင်အမြန်လာကြလော့-- ဆိုတဲ့ စကားလုံးထဲက အို အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ယောက်ျား။ မိန်းမ။ ကလေး။ ဒုက္ခိတ အားလုံးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိ အစွဲရှိတိုင်း- ကျမ်းတော်ပါ ဥပဒေများကို သေချာစွာ မလေ့လာဖြစ်ပါဘဲ- ထင်မြင်ရာများကို မသုံးသပ်သင့်ပါ။
by Than on September
by Ma Mei on September 4, 2010
အမည်ကိုမဖော်ပြလိုဘဲ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့အလင်းစာဆောင်မှ စတင်ပြီးကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အာလင်မ်ပညာရှင်အများစုက အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေယိုဘန်ကျောင်းက အောင်မြင် ဘွဲ့ရခဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။ ၁၉၆၀ က ဒီနေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ အစ္စလာမ် အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ဦးစီးခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်ရှိကြတယ်။ မမီးရေးတာထဲမှာ '' တချို့'' ဆိုတာပါတယ်။ အားလုံးကို extremist ဆိုခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်။
ဥပမာ ဘော့စနီးယားမွတ်စလင်မ်ဆိုရင် တူရ်ကီနိုင်ငံကတဆင့် အစ္စလာမ်သာသနာဟာ ဘာ့စနီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် တူရကီရိုးရာ တူရကီယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဒီနေ့ထိ အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့အတူ ကျင့်သုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ရိုးရာနဲ့သာသနာကို ထင်ထင်ရှားရှားမခွဲခြားတတ်ဘူး။
မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်း အစ္စလာမ်သာသနာဟာ အများအားဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကတဆင့် ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် အိန္ဒိယရိုးရာ အိန္ဒိယ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဒီနေ့ထိ အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့အတူ ကျင့်သုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ တချို့မြန်မာ မွတ်စလင်မ်များ ကိုယ်တိုင်လည်း ရိုးရာနဲ့သာသနာကို ထင်ထင်ရှားရှားမခွဲခြားတတ်ဘူး။
မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေနှိပ်ကွပ်ခံနေရတဲ့အကြောင်းရင်း တစ်ခုမှာ ၁၉၃၀ ပတ်ဝန်းကျင် ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်းမတိုင်ခင်က ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာ အူရ်ဒူ - ဟင်ဒီ စကားမတတ်ရင် အလုပ်ရဘို့အခက်အခဲရှိတာကို မြန်မာလူမျိုးများက နာကျည်းတဲ့အတွက်ကြောင့် လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဦးနေဝင်းအစိုးရ အာဏာမှာကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ကုလားမုန်းတီးရေးဝါဒကိုအလွယ်တကူဖြန့်နိုင်ခဲ့တယ်။
မွတ်စလင်မ်အချင်းချင်း အငြင်းပွါးကွဲအက် နေကြတော့ ကုလားမုန်းတီးရေးဝါဒ ပိုမိုထိရောက်ခဲ့တယ်။
စလာမ်ပါ . . .
မမီး ထောက်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာလေးအတွက် . . . ကျနော် ကုရ်အာန် . . . ဟဒီးစ် အထောက်အထားပေးခဲ့ပါ့မယ် . . .
စူရာဟ်နေစာဟ် အာယသ် 59 မှာ အလ္လာ့ဟ်အမိန့်နာခံ၊ ရစူလ်အမိန့်နာခံ၊ နောက်ပြီး ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အမိန့်ကို နာခံ
ဖို့ မိန့်ထားပါတယ် . . . ဟဒီးစ် မှာလည်း . . .
ကျွန်ုပ်သည် အသင်တို့အား မှာကြားခဲ့မည်။ အသင်တို့သည် အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်အား
ကြောက်ရွံ့ရိုသေ ခန့်ညားကြကုန်။ တရားစကား နားထောင်ကြကုန်။ အမိန့်ကို
နာခံကြကုန်၊ အမိန့်ပေးသူသည် ဟဗရှီနီဂရိုးကျေးကျွန်ပင်ဖြစ်လင့်ကစား
၄င်းအမိန့်ကို နာခံကြကုန်။ ကျွန်ုပ် မရှိသည့် နောက် အသင်တို့အနက်
အသက်ရှင်နေသူသများသည် များစွာသော ကွဲပြားမှုကို တွေ့မြင်ကြရပေမည်။ ထိုအခါ
အသင်တို့၏ တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်၏ စွန္နသ်လမ်းစဉ်နှင့် တရားလမ်းမှန်ရထားသော
ဖြောင့်မှတ်မှန်ကန်သော ခလီဖဟ် သမ္မတ များ၏ လမ်းစဉ်ကို
ကျင့်သုံးရန်ပင်ဖြစ်သည်။ အသင်တို့သည် ထိုလမ်းစဉ်ကို ယုံကြည်အားထားကြကုန်၊
ထိုလမ်းစဉ်ကို သွားများဖြင့် ကိုက်ထားကြကုန်၊
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထွင်သော အရာများအားလုံးသည် ဗစ်ဒ်အသ် ဖြစ်သည်။
ဗစ်ဒ်အသ်မှန်သမျှသည် လမ်းမှားချည်းသာဖြစ်သည် . . ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
by Win Myint Aung @ Mohammed Imran on September 5, 2010
Assalamualaikum Hay Shan bhai,i explain you according to your explanation.You said according to surah nisah,ayah no.59:"you have to accept Allah(s.w.t) command,to accept your messenger(Muhammed(pbuh)),to accept your governor or ruler ".According to this ayah,we have to give priority to Allah's word(Quran)>ahadith(prophet muhammed's word)>maulana or sheikh or mufti word.I mean we have to obey
1st Allah's wordz(uncomparable glorious holy Quran),uncomparable with man made books.
third ,finally maulana or sheikh or mufti or scholars commend.However he can not give command with his desire and he need to obey and refer from Quran and Hadiths.Because Allah(s.w.t) said in Quran,surah yunus,"every opinion and suggestion is not true".We can not change the islamic rules according to our desire.Only Allah(s.w.t) can decide and change.No one can compare with Allah (s.w.t).you can see in surah ikhlas.
In addition,Allah said,"al quran nul hudal lin naas"=The Quran is for everyone,not only for Mufti,maulana,sheikh,scholars.In other word ,everyone whoever he may be muslim,christian,jew,buddhist can learn and read The Quran.If they do not learn The uncomparable Quran,how can they know "tau heed"?
At the moment ,one of the best selling books in the world is "The uncomparable Glorious Quran".
The only one book that Allah(s.w.t) promise to protect until the day of judgment day is The Holy Quran.
In Quran,surah baqarah,Allah(s.w.t) said,"Alif laam meem zar li kal kitahbu la rai ba fee=this Quran must be believe without any suspect,this book guide everyone right way"
In other ayah of Quran,( i dont know exactly which ayah,i will let u know later),Allah(s.w.t) said to every human being,"do you want to regard something as haram that I have already allowed to do(halal) and do you want to legislate something halal that I have already resticted,prohibited(haram)".According to this surah,The only one who can tell what is halal what is haram what is maqruh(dislike) is ALLAH(S.W.T),NOT HUMAN BEING.
Additionally,if you want to refer hadith books,you need to give definite parts and books.for example,Bhurkari,book3.Otherwise it is unreliable.There are only six reliable hadiths.In arabic ,they are called "Sweehah Sittah".They are
3.Tirmidi(Imam Tirmidi,the owner of photobrain)
5.Abu dawuud(Imam Abudawuud)
6.Ibn Marjah(Imam Ibn Marjah)/Al Muwatta(Imam Malik,one of four fikah scholar)/Ahmed.Even these scholars(rahmatullah) said,"if our hadith is contradict to The Quran,throw it away and you have to obey only what Allah(s.w.t) in Quran."If you do not trust/believe me,you can ask so many mufti,maulanar.
ok,salaam,May Allah bless u and all muslims.
Ref : noorullah.ning.com (IYS forum)
Ref : Islam yaungche society group
Posted by Ordinary person at 5:23 PM